Administrateurs civils: tsy salama ny sendikan’izy ireo eto Madagasikara | Région Boeny
Administrateurs civils: tsy salama ny sendikan’izy ireo eto Madagasikara
13 février 2017 A La Une
Tsy salama ny sendikan’ny Administrateurs civils eto Madagasikara noho ny fatoritorian’izy ireo tao anatin’ny taona maro, noho ny antony ara-politika sy teknika, ary noho ny adin’ny samy Administrateurs civils ao Antananarivo.
Io no nambaran’ny filoha irasam-paritry ny sendikan’ny Administateurs civils ato anatin’ny faritan’i Mahajanga, Atoa Saïd Ahamad Jaffar nandritra ny lanonana firariantsoa fanaon’izy ireo isan-taona, ny Sabotsy 04 febroary lasa teo teny amin’ny Lapan’ny Faritra, Mahajanga be.
Avahako kosa ireo Administrateurs civils aty Mahajanga hoy izy, izay tsy tafiditra tao anatin’ny olana teo amin’ny biraon’ny sendika nasionaly noho ny fahaiza-miray hina sy firalahina manokana ananan’izy ireo.
Manana fikasana hanangana birao sy handray mpikambana vaovao araka izany, ho fanarenana ny tsy mety araka ny fampitambaovao nomen’ny filoha irasam-paritry sendikan’ny Mahajanga ihany, ny fianakaviamben’ny Administrateurs civils eto Madagasikara amin’ity volana ity ary hisy ny fihaonambe ho tanterahina any Antananarivo mba hametrahana ny maha izy azy eto amin’ny firenena ny fiandrianan’ny fampandehanan-draharaha ara-panjakana ankapobeny.
Ho karazana fitaratra ho an’ny corps hafa io hapetraka io, ary ahafahan’ny Administrateurs rehetra mivondrona sy miray saina ary hifanome tànana amin’ny hetsika izay hataon’ny sendikan’ny Administrateurs civils, hoy izy namarana ny teniny.
Ho an’ireo eto Mahajanga manokana dia manodidina ny 15 amin’izao fotoana ny isan’ireo Administrateurs civils am-perin’asa, anatin’ny sendika, anisan’izany ireo eny anivon’ny distrika.
Manodidina ny 20 kosa, anisan’zany ireo Administrateurs civils efa misotro ronono, ny isan’ireo mivondrona ao anatin’ny Fikambanana ara-tsosialin’izy ireo, izay miasa sy monina eto Boeny ary tarihin’Atoa Razafintsalama Gabriel. Ity farany moa dia nitantana indroa mihantoana ny Faritan’i Mahajanga fahiny fony mbola nisy ny hoe Filohan’ny Faritany sy Filohan’ny delegasiona manokana na PDS.